खुट्टा काप्छ ? पार्किन्सन्सको लक्षण हुनसक्छ – MeroJilla.com
खुट्टा काप्छ ? पार्किन्सन्सको लक्षण हुनसक्छ
बुढ्यौलीमा हात-खुट्टा काप्छ, पिडुला दुख्छ । यसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । यद्यपी उमेर नपुग्दै यस्तो समस्या देखियो भने, त्यसलाई स्वभाविक वा सामान्य मान्न हुँदैन ।
जब हातखुट्टा काप्छ एवं पिडुला दुख्छ, हामी ठान्छौं, कमजोरीको कारण यस्तो भयो
शरीरमा आइरन वा भिटामिन बी-१२ को कमी भएमा पनि यो समस्या हुन्छ । समयमै रोगको पहिचान नगरे पछि गएर यो समस्या पार्किन्सन्समा बदलिन सक्छ । त्यसैले, पार्किन्सन्स रोगबाट बच्न पनि समयमै यो रोगको पहिचान जरुरी छ । एक तथ्यांक अनुसार विश्वमा पार्किन्सन्सको विरामीको संख्या ६० लाख भन्दा बढी छन् ।
मधुमेह तथा मिर्गौलाका विरामीलाई पनि यो समस्या हुनसक्छ । गर्भावस्थामा केही महिलाहरुमा पनि यो समस्या देखिन सक्छ, जुन प्रसुती पश्चात्त स्वत कम हुने गर्छ । कयौ पटक आणुवंशिक कारणले पनि यो समस्या निम्त्याउन सक्छ । यद्यपी, आइरन र भिटामिन बी -१२ यसको प्रमुख कारण मानिन्छ ।
यो समस्या भएमा निद्रा विथोलिने गर्छ । व्यक्तिलाई कतिसम्म हुन्छ भनेर उसको खुट्टा भित्र केही छिरेको महसुस हुन्छ र खुट्टा हल्लाउन थाल्छ । यही कारण हो कि मानिस अनायासै आˆनो खुट्टा हल्लाउन थाल्छ ।
-खानामा हरियो सागसब्जी, अण्डा, कुखुराको मासु तथा दूक्ष्धजन्य पदार्थलाई समावेश गर्ने ।
-अल्कोहल वा सिगरेटबाट टाढा रहने किनकी यसको अत्याधिक सेवनले मस्तिष्कमा डोपामाइनको कमी भई रेस्टलेस लेगको समस्या निम्तिन सक्छ ।
-यस्ता समस्यामा दुखाईबाट केही समयको लागि छुटकारा पाउन पैतालाको मालिस पनि प्रभावकारी मानिन्छ । तर यसले दीर्घकालीन रुपमा रोग निको हुँदैन ।
-यो समस्याबाट छुटकारा चिकित्सकका सल्लाह अनुसार औषधीउपचार गर्नुपर्छ ।
-डोपामाइन हर्मोनको स्तर बढाउने औषधीको सेवनले यो रोग कम हुनसक्छ ।